खाना खाएपछि पेट दुख्ने समस्याकाे कारण र उपचार - उपयोगी info
December 27, 2021 Pradeep karkiLeaveaComment on खाना खाएपछि पेट दुख्ने समस्याकाे कारण र उपचार
१) लिभर सिरोसिस : लिभर बिग्रिएको अवस्थालाई लिभर सिरोसिस भनिन्छ। कसैकसैको रक्सी सेवनले गर्दा पहिले नै लिभर बिग्रिएको हुन सक्छ। लिभिर सिरोसिसका कारण पेट पहिलेदेखि नै ढाडिएको हुन्छ, जसले गर्दा थोरै खाना खाँदा पनि पेट दुख्न सुरु हुन्छ। २) क्रोन्स डिजिज : क्रोन्स डिजिजि भनेको मुखदेखि सानो आन्द्रा, ठूलो आन्द्रा हुँदै मलद्वारसम्मै सानो-सानो घाउ आउने समस्या हो। यस्तो समस्या भएकाहरुलाई खाएको खानेकुराले घाउमा ठोक्किने भएकाले खाना खाँदा पेट दुख्न सक्छ।
३) भाइरल इन्फेक्सन : पेटमा ब्याक्टेरियल भाइरल इन्फेक्सन छ भने पेट पहिले फुलेको हुन्छ। यो इन्फेक्सन भएको अवस्थामा पनि थोरै खाना खाँदा पेट दुख्न थालिहाल्छ। ४) अल्सर : अल्सर भएर खाना जाने नली (पाइलोरिक रिङ) साँघुरिएको भएमा पनि खाना खाँदा पेट दुख्ने गर्छ। यसले गर्दा पेट ढाडिँदै आउँछ र पेट नराम्रोसँग दुख्छ।
५) पेटको शल्यक्रिया : क्यान्सररअल्सर भएर पेटको आन्द्राको शल्यक्रिया गरिएको वा कुनै अंग काटिएको भएमा पेटको भाग साँघुरो भएको हुन्छ। यस्ता बिरामीको पेटमा थोरै खानेकुरा पर्दा पनि ढुस्स भएर फुल्छ र दुखाइ बढ्छ। ६) कब्जियत : पेट दुख्नुको कारण कब्जियत पनि हो। अधिकांश मानिसलाई कब्जियतका कारण पेट दुखिरहेको हुन्छ। जति खाना खाए पनि दुईदेखि तीन तीन दिनसम्म दिसा हुँदैन। यसलाई ‘इरिटेबल वल सिन्ड्रोम’ भनिन्छ। पर्याप्त मात्रामा ग्यास पास नभएका कारण पेट ढाँडिरहन्छ र दुखिरहन्छ।
७) कार्वोनेटेड खानाको अत्यधिक प्रयोग : कार्वोनेटेड खानेकुरा (जस्तैः भुटेको, तारेको, पोलेको मासुको परिकार आदि) धेरै खाएमा पेट दुख्ने समस्या आउँछ। ८) ग्यासयुक्त पेय पदार्थ : ग्यासयुक्त पेय पदार्थ (कोक, फेन्टा, पेप्सी आदि) पिउँदा पेटमा ुग्यास फर्मेसनु हुन्छ र पेट दुख्न थाल्छ। यस्तै बन्दा, काउली, प्याज, लसुन, केराउ आदि ग्यास फर्मेसन गर्ने खानेकुरा खाँदा पनि कसैकसैलाई पेट दुख्न सक्छ।
९) खानाको तरिका : खाना खाँदा आरामले बिस्तारै खानुपर्छ। छिटो-छिटो वा हतारमा खाँदा पनि पेट दुख्ने समस्या आउँछ। छिटोछिटो खाना खाँदा खानासँगै हावा पनि पेटभित्र जान्छ। जसले पेटमा ग्यास भरिन्छ र पेट ढाडिएजस्तो भएर दुख्ने गर्छ। १०) प्रदूषित खाना : प्रदूषित खानेकुरा खाँदा पनि पेट दुख्ने हुन्छ। यस्तै धेरै दिनको बासी खानेकुरा, बजारमा धुलो-फोहोर ठाउँमा राखिएका खानेकुरा र राम्रोसँग नपाकेको खानेकुरा खानासाथ पनि पेट दुख्ने हुन सक्छ।
१) खाना समय लगाएर विस्तारै चपाएर खाने। २) चना, केराउजस्ता गेडागुडी खाँदा एक दिन भिजाएर राख्ने र अर्को दिन सफा गरेर राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। ३) नियमित व्यायम गर्ने। ४) बढी चिल्लो, पिरो, अमिलो खाने कुरालाई कम गर्ने। ५) साँधेको, पोलेको, तारेको मासुका परिकार सकेसम्म नखाने। ६) धूमपान र मध्यपानको प्रयोग नगर्ने। ७) पेट दुखेको निको पार्न अनुमानका भरमा औषधिको प्रयोग नगर्ने। ८) प्रसस्त शुद्ध पानी पिउने। ९) जङ्क फुडको प्रयोग नगर्ने। सकभर घरमै पकाएको ताजा खानेकुरा खाने बानी बसाल्ने। १०) पेट सम्बन्धी समस्या भएमा चिकित्सकको परामर्श लिने।
धन ठूलो कि मन ? तपाई के भन्नुहुन्छ ? यो पढ्दा राम्रो
June 19, 2021 Pradeep karki
वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा यी सामानहरु राख्नुहोस, सधै सम्पन्न बन्नुहुनेछ
January 1, 2021 March 20, 2021 Pradeep karki
October 26, 2021 Pradeep karki